Ingaba kukho naluphi na ukhuseleko kwi 3D eziprintiweyo imoto yombane? Ngaba nesibindi ukuyivula mhlawumbi? - China Cixi Lanbo Printing
Ingaba kukho naluphi na ukhuseleko kwi 3D eziprintiweyo imoto yombane? Ngaba nesibindi ukuyivula mhlawumbi?
3D technology yoshicilelo isekelwe imodeli lwedijithali, usebenzisa izinto bondable ezifana metal olungumgubo okanye iplastiki ukuprinta isakhiwo umaleko into ngu umaleko. Le ubuchwepheshe izicelo kwicandelo izacholo, izihlangu, uyilo mveliso, ulwakhiwo, ezobunjineli kunye nokwakha, izithuthi, aerospace, kanye amazinyo.
NgoNovemba 2010, urbee imoto yokuqala yehlabathi ziprintwe kwiprinta 3D kwaphuma. Kutshanje, Italian isithuthi electric umakhi XEV yabhengeza ukuba iza kusebenzisana China i-3D inkampani izinto umshicileli polymake ukuvelisa 3D eshicilelweyo LSEV isithuthi yombane, nto leyo eya kuba ngabokuqala ngobuninzi eziveliswa 3D lwehlabathi ishicilelwe imoto yombane. Umjikelo mveliso yale moto imalunga Xa kwiintsuku ezi-3, imoto has ngesantya top of 43 mph, enye intlawulo iikhilomitha 93, yaye imoto epheleleyo Umlinganiseli kg 450 kuphela.
Kakade ke, Honda yaseJapan kutshanje wakha imoto yombane isihlalo sokucamagusha olunye, umzimba phantse akhiwa panels 3D eziprintiweyo, kwaye ngoku ubukhulu becala kusetyenziswa ukuthumela amaqebengwana, kodwa Honda wathi umfuziselo kumlungele na imveliso mass. Nangona kungekho datha yoqwalaselo ethile ye 3D eshicilelweyo iimoto zombane, ingakumbi data zokhuseleko, njengokuba iteknoloji asebenzisekayo, oko kusenokuba iteknoloji ukuphazamisa shishino. Sifanele sibe nengqondo evulekileyo ukuyamkela. Ukususela izithuthi 3D yangoku eshicilelweyo wombane, nanzo buzinze miniaturization kunye nesezantsi isantya amasimi. Ndiyakholwa ukuba kuyakubakho iinkcukacha ezifanelekileyo kwizithuthi 3D ezishicilelweyo zombane kule minyaka 1-2 ezayo, ezifana nokhuseleko kunye operability kwezithuthi. , Intuthuzelo ngaphezulu. Imoto yombane 3D ushicilelo lisathukuza layo, yaye apho kuya kubakho imigaqo kunye neengxelo uvavanyo nokhuseleko kunye namava yabakhweli-zithuthi zilandelayo, ukuze izithuthi ngokuthi abathengi baya kuba kwimarike, ngoko ekuhambeni kwexesha, 3D eziprintiweyo iimoto zombane kuya kufika. Okukhona mgangathweni. Enyanisweni, umbhali akanandaba ukuvula 3D eshicilelweyo iimoto zombane, ukuba lo 3D ishicilela iindleko imoto yombane ephantsi, ukhuseleko liqinisekisiwe, kwaye ukuhlangabezana imoto yabo kufuneka kutheni ungazami nto!